I-Biography nezenzo zikaBenjamin Franklin | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kuwo wonke umlando sihlangane nabantu abaningi abazuze impumelelo enkulu. Omunye wabantu okwazile ukulahlekelwa yikho konke ngu Benjamin Franklin. Le yindoda eyayingumsunguli waseMelika, intatheli, iphrinta, usopolitiki kanye nomcabangi. Ungumuntu umuntu angaba nomona ngaye. Ngokungafani nabanye abantu, wazinikela emisebenzini eminingi kakhulu futhi waphumelela kangangoba kungavunywa ukuthi wayenamandla amakhulu okuzivumelanisa nakho konke. Lo ngumuntu ovuke phansi futhi waba esinye sezikhombo emlandweni waseMelika.
Kulesi sihloko sizokutshela yonke i-biography nezenzo zikaBenjamin Franklin.
1 UBenjamin Franklin biography
2 Ukulangazelela nokuzikhandla
3 Ukuqanjwa kanye nefilosofi kaBenjamin Franklin
UBenjamin Franklin biography
Le ndoda mhlawumbe ingenye yezinkomba ezinhle kakhulu ongaba nazo njengesibonelo. Ungomunye wabantu abafinyelela ekuqondeni okokuqala sonke leso sikhathi yimali. Ngenxa yokuhlakanipha, ukuqonda nokuzikhandla, ungafinyelela konke okufunayo. Lokhu kumenze wakwazi ukuhamba phakathi kwezinkundla zepolitiki nezebhizinisi ngaphandle kokuziba zonke ezinye izinkathazo zakhe nesifiso sakhe sokuthola izinto eziningi. Umphumela womzamo wale ndoda nokufuna ukwazi kwaba yimpilo okufanele isetshenziswe ngokugcwele inqobo nje uma isizathu sayo sasiholela.
UBenjamin Franklin wazalelwa eBoston ngo-1706. Le ndoda yayingenayo imfundo enhle kakhulu, kepha yathola imfundo eyisisekelo esikoleni eyashiya lapho ineminyaka eyishumi. Omunye wesikole owashiya phansi isikole wasebenza noyise efemini yamakhandlela nensipho. Ngaphezu kwalokho, lo kwakungewona umsebenzi wakhe kuphela, kodwa futhi wayesebenza njengetilosi, isitini, umbazi, umphenduli, phakathi kwabanye. Ukuze athole ubizo lwakhe, waphendukela emisebenzini eyahlukahlukene waze wathola lokho ayefuna ukuzinikela kukho: umuntu ofundela umshini wokunyathelisa.
Emshinini wokunyathelisa waqala ukusebenza noMfowabo futhi bakwazi ukwenza imibhalo yokuqala eyashicilelwa. Kulezi zindatshana kwakukhona ukugxeka okuningi kwezepolitiki nokuziphatha ngaleso sikhathi. Wayethathwa njengosomabhizinisi osemncane futhi enesifiso sokuphila ngokwanele ukuhlala emthunzini woMfowabo. UBenjamin Franklin wayenobuhlakani obukhulu nemikhuba yokusebenza enamandla kakhulu. Wayengumuntu ongachithi isikhathi noma imali. Inhloso yakhe kwakungukuzenzela owakhe umshini wokunyathelisa.
Waya ePhiladelphia eyokwengeza ukuqeqeshwa kwakhe futhi wazenzela inkampani yakhe yokuphrinta enenkontileka yangempela yokunethezeka. Kwakunikezelwe ukuphrinta imali yephepha yamakholoni aseNyakatho Melika. Wabuye waduma ngokubhala i-almanac kaRichard empofu, kwakuwuhlobo lwamagazini umbhali afaka kuwo ezinye izinkomba, izeluleko ngempilo, izinkinga zezibalo nezinto zokuzilibazisa, phakathi kokunye. Ngaphandle kokusebenza emshinini wokunyathelisa uzinikele ekubhaleni ezinye izindatshana ezifana nezakhe Ukudicilelwa kwenkululeko kanye nesidingo, injabulo nobuhlungu.
Benjamin Franklin Wayephile impilo egcwele imisebenzi eminingi ayenza. Wakwazi ukudala amasosha omuzi wokuzithandela futhi wanquma ukuqala iYurophu ukuze avikele inkululeko ye-United States enhlabathini yamaNgisi. Lokhu kwakungewona umsebenzi wakhe wezepolitiki kuphela, njengoba naye waya eFrance njengommeleli osemthethweni futhi wasayina isivumelwano sokuhweba. Yilapho athola khona isikhundla sikangqongqoshe futhi wasayina isivumelwano esiqeda impi yaseMelika yokuzimela. Wayengumuntu onamabhongo okwakunzima ukufeza izinhloso zakhe futhi waba ngumuntu ongakholeki.
Wayethathwa njengamandla emvelo ngenxa yomsebenzi wakhe wobungcweti nokuzilibazisa ayenza ngakho izinto. Wayengumpetha wesayensi. Wenza izifundo ezithile ngogesi ezamholela enhlosweni yenduku yombani. Wayenezinkinga ezithile zokubona, ngakho-ke waba nentshisekelo ku-optics futhi kwaba nemiphumela emihle lapho esungula ama-lens bifocal. Lokhu kwenzelwe ukugwema ukushintsha izibuko njalo uma kufanele ubheke phezulu noma kude.
Ukuqanjwa kanye nefilosofi kaBenjamin Franklin
Okunye kokusungula kwakhe kwakunguhhavini laseFranklin. Luhlobo oluphephile lwesitofu kunezindawo zomlilo zendabuko. Wabuye wasungula i-humidifier, i-catheter eguquguqukayo ye-urinary, i-odometer, i-glass harmonica, namaphiko okubhukuda. Waba ngowokuqala futhi ukuchaza iGulf Stream. Zonke lezi zimangaliso zibangelwe ubizo lwakhe olukhulu lwesayensi kanye nesidingo kanye nelukuluku lokuthola izinto ezintsha.
Esinye sezisho zikaBenjamin Franklin ukuthi kwathi uma ecabanga ngenjabulo naye wazitshela ukuthi uzophinda aphile impilo yakhe kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni uma ekwazi. Vele Ucele ilungelo lokukwazi ukulungisa empilweni yesibili amaphutha athile abenawo kweyakhe yokuqala.
Le ndoda yafa ngo-1790 ngenxa ye-pleurisy. Lesi sifo sisebenzise ukuphela komsebenzi ogcwele impumelelo. Kodwa-ke, azikho izibonelo eziningi kakhulu zempilo ephilwa ngokugcwele nokuchithwe kahle. Wayengumuntu ojabule kakhulu futhi omunye wabantu ababekhanga futhi eyisibonelo kunabo bonke emlandweni. Futhi kungukuthi uBenjamin Franklin wazinikela entweni ethile kuwo wonke umzuzu wokuphila kwakhe. Ifilosofi yakhe ingafingqwa ngegama elilodwa: pragmatism.
Leli gama alibhekiseli kulokho okushiwo yifilosofi yamanje, kepha kunalokho lisho impilo yansuku zonke. Ifilosofi yakhe bekungukuthola izimfanelo ezingamsiza ukuthi athole injabulo emiphumeleni ayithola kulokho ayekufuna. Ezinye izimfanelo zayo ezinhle zazikhona ukuzithiba, ukonga, ukubekezela nokuthatha isinyathelo lokho kumsizile ukuthi asebenze nsuku zonke ukuthuthukisa zonke izici noma ngabe kusengaphambili kangakanani.
Imibono yakhe ibuye yasiza ekuzuzeni okujwayelekile kusukela ekufezekisweni kwezinhloso zakhe zokuthola injabulo ngokulingana phakathi kokuzijabulisa nobuhlungu babantu bonke. Ngokufingqa, kungashiwo ukuthi impilo kaBenjamin Franklin iyisibonelo esicacile sokusho ukuthi lapho ufuna, unga.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana ne-biography nokuxhashazwa kukaBenjamin Franklin.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Benjamin Franklin
I-GIS (Izinhlelo Zolwazi Lwezindawo)